Tag: mention | Martech Zone
Fitaovana fanaraha-maso marika 10 izay azonao atomboka maimaim-poana
Alatsinainy Aprily 5, 2021 Alatsinainy Aprily 5, 2021 Anna Bredava
Ny marketing dia sehatry ny fahalalàna ka indraindray mety hahagaga. Mahatsapa ianao fa mila manao zavatra tsy mampihomehy indray mandeha: mieritrereta amin'ny alàlan'ny paikadim-barotrao, manaova votoaty, manara-maso SEO sy marketing ara-tsosialy ary maro hafa. Soa ihany fa misy hatrany ny martech manampy antsika. Fitaovana ara-barotra dia afaka manala enta-mavesatra amin'ny sorontsika ary mandeha ho azy ireo ampahany mankaleo na tsy dia mahaliana
Riffle: Raiso izao ny Plugin Twitter Chrome!
Alakamisy, Aogositra 21, 2014 Alakamisy, Aprily 7, 2016 Douglas Karr
Vao nanoratra momba ny fitiavako efa manjaka miaraka amin'ny Twitter aho ary nizara fitaovana roa lehibe hitantanana ireo mpanaraka Twitter anao. Ity misy fitaovana tsara iray hafa izay vao hitako! Riffle avy amin'i CrowdRiff dia Plugin Chrome iray izay manampy pane ao amin'ny dashboard Twitter izay manampy anao hamantatra sy hamakafaka vaovao momba ilay mpampiasa Twitter. Riffle dia manome fampahalalana ao anatin'izany ny hetsika, ny fandraisan'anjaran'ny kaonty, ny loharanon'ireo bitsika ary koa ny fiantsoana azy ireo sy ny fiahiany azy.
manonona: Tsotra ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny haino aman-jery
Alakamisy, Septambra 5, 2013 Alatsinainy, 23 Jona, 2014 Douglas Karr
Todd Wheatland, lohan'ny mpitarika eritreritra ao amin'ny Kelly Services, vao tsy ela akory izay no nanoratra momba ny fanamarihana tao amin'ny lahatsoratra iray avy amin'ny Social Media Examiner, fitaovana media sosialy 14 ampiasain'ny Marketing Pros. mention dia sehatra fanaraha-maso ara-tsosialy sy fanaraha-maso media. mention dia novolavolaina ho mpisolo toerana an'ny Google Alerts. Izy ireo dia ohatra amin'ny boky momba ny fananganana sehatra amin'ny alàlan'ny fanaovana zavatra iray tsara kokoa noho ny olon-kafa rehetra. Ary koa ho fifaliana tanteraka hampiasaina,